février 2013 – filazantsaramada
» Ary Izy namaly ka nanao hoe: tsy nirahina aho afa-tsy ho amin’ny ondry very amin’ny taranak’Isiraely. Fa nanatona ihany ravehivavy, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe : Tompoko ô, vonjeo aho. Fa Izy namaly ka nanao hoe: tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an’ny amboakely. Fa hoy ravehivavy: Marina […]
Publié parfilazantsaramada février 22, 2013 février 22, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Lehibe ny finoanao, tongava aminao araka izay irinao.
« Ary Jesosy dia nentin’ny Fanahy nankany an’efitra, mba halain’ny devoly fanahy. Ary nifady hanina efa-polo andro sy efa-polo alina Izy, koa nony afaka izany dia noana. Dia nanatona ny mpaka-fanahy ka nanao taminy hoe: Raha Zanak’Andriamanitra Hianao, dia teneno ho tonga mofo ireto vato ireto. Fa Izy kosa namaly ka nanao hoe: voasoratra hoe: « Tsy […]
Publié parfilazantsaramada février 15, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Koa satria niaritra ny nofo Kristy, dia aoka mba ho fiadiana ho antsika koa izany
« Ary tamin’izay Jesosy dia avy tany Galilia ka tonga teo amoron’i Jordana dia nanatona an’i Jaona Izy mba hataony batisa. Fa Jaona nandà Azy ka nanao hoe: izaho no tokony hataonao batisa, ka hianao indray va no mankaty amiko? Fa namaly Jesosy ka niteny taminy hoe: Ekeo ihany ankehitriny, fa izao no mety amintsika hahatanteraka ny fahamarinana rehetra. Ka […]
Publié parfilazantsaramada février 8, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Amin’ny batisa dia manao fanekena amin’ny olona Andriamanitra!
« Hianareo no navela hahalala ny zava-miafina ny amin’ny fanjakan’ Andriama nitra; fa amin’ny olon-kafa dia fanoharana no atao, mba hijery izy fa tsy hahita, ary hahare, fa tsy hahafantatra. Koa izao no hevitry ny fanoharana; Ny voa dia ny tenin’Andriamanitra. Ireo teny amoron-dàlana dia izay mandre, nefa avy ny devoly ka manaisotra ny teny ao am-pony, fandrao hino izy […]
Publié parfilazantsaramada février 1, 2013 Publié dansUncategorizedLaisser un commentaire sur Aoka ny tenin’Andriamanitra hitombo ao anatintsika